Arcturus: ihe ọ bụ, àgwà, akụkọ ihe mere eme na curiosities | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 05/01/2022 10:00 | Astron
N'oge opupu ihe ubi na n'abalị n'oge okpomọkụ, onye ọ bụla na-ekiri ya na ugwu ugwu ụwa ga-ahụ kpakpando na-egbuke egbuke na mbara igwe, nke dị elu: oroma a ma ama, na-echekarị maka Mars. Ọ bụ Arcturus, kpakpando na-egbuke egbuke na kpakpando Bootes. A maara na ọ bụ kpakpando na-egbukepụ egbukepụ na mbara igwe dum.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere Arcturus, àgwà ya na curiosities.
1 Arcturus, kpakpando kacha na-egbukepụ egbukepụ na mpaghara ugwu eluigwe dum
2 Arcturus atụmatụ
3 Kpakpando ọbịa
4 Ụfọdụ akụkọ ihe mere eme
Arcturus, kpakpando kacha na-egbukepụ egbukepụ na mpaghara ugwu eluigwe dum
Ha na-eme atụmatụ na Arcturus bụ nnukwu kpakpando nke na-adọ aka ná ntị ihe ga-eme anyanwụ n’ihe dị ka ijeri afọ ise. Nnukwu ogo nke Arcturus bụ n'ihi ntụgharị n'ime kpakpando, bụ nke sitere n'afọ ndụ ya. 5% nke kpakpando anyị na-ahụ na mbara igwe kwesịrị ichegbu onwe ha maka ime otu ihe: gbanwee hydrogen ka ọ bụrụ helium. Mgbe kpakpando na-eme nke a, ndị na-enyocha mbara igwe na-ekwu na ha nọ na "mpaghara isi usoro." Anyanwụ na-eme nke ahụ. Ọ bụ ezie na okpomọkụ nke anyanwụ elu bụ ihe na-erughị 6.000 degrees Celsius (ma ọ bụ 5.770 Kelvin ka ọ bụrụ nke ziri ezi), okpomọkụ ya na-erute 40 nde degrees, nke bụ n'ihi mmeghachi omume ngwakọta nuklia. Nucleus na-eto nke nta nke nta, na-agbakọ helium n'ime ya.
Ọ bụrụ na anyị chere ijeri afọ 5, mpaghara dị n'ime nke anyanwụ, mpaghara kachasị mma, ga-eto nke ọma iji gbasaa oyi akwa dị n'elu dị ka balloon ikuku na-ekpo ọkụ. Ikuku na-ekpo ọkụ ma ọ bụ gas ga-eburu ibu buru ibu ma anyanwụ ga-atụgharị ghọọ nnukwu kpakpando na-acha uhie uhie. N'ịtụle oke ya, Arcturus nwere nnukwu olu. Njupụta ya bụ ihe na-erughị 0,0005 njupụta nke anyanwụ.
Mgbanwe agba nke kpakpando na-agbasawanye bụ n'ihi na a na-amanye oghere ugbu a ka ọ kpoo ebe dị elu karị, nke dị ka comet na-agbalị iji otu ọkụ ahụ kpoo ọkụ ugboro narị ugboro. Ya mere, okpomọkụ dị n'elu na-ebelata ma kpakpando na-acha uhie uhie. Ìhè na-acha uhie uhie kwekọrọ na mbelata okpomọkụ dị n'elu ihe dịka 4000 Kelvin ma ọ bụ obere. Kpọmkwem, okpomọkụ dị n'elu Arcturus bụ 4.290 degrees Kelvin. Ụdịdị dị iche iche nke Arcturus dị iche na anyanwụ, mana ọ dị ka ụdịdị dị iche iche nke ebe anwụ. Sunspots bụ mpaghara "oyi" nke Sun, yabụ nke a na-akwado na Arcturus bụ kpakpando dị jụụ.
Mgbe kpakpando na-agbasa ngwa ngwa, nrụgide nke ịpịkọta isi ga-enye ntakịrị, mgbe ahụ, etiti kpakpando ahụ ga-emechi nwa oge. Agbanyeghị, ìhè sitere na Arcturus na-enwu karịa ka a tụrụ anya ya. Ụfọdụ ndị mmadụ nzọ nke a pụtara na a na-emegharịkwa oghere ahụ ugbu a site na ijikọ helium n'ime carbon. Ọfọn, site n'ịgbaso ụkpụrụ a, anyị amaraworị ihe kpatara Arcturus ji na-afụ ụfụ: okpomọkụ na-ebufe ya. Arcturus fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu 30 karịa anyanwụ na, n'ụzọ dị ịtụnanya, oke ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu Astro Rey. Ndị ọzọ na-eche na ogo ha abawanyela naanị site na 50%.
Na tiori, kpakpando nke na-emepụta carbon sitere na helium na mmeghachi omume ngwakọta nuklia agaghị egosipụta ọrụ magnetik dị ka anyanwụ, mana Arcturus ga-ebunye X-ray dị nro, na-egosi na o nwere okpueze dị aghụghọ nke magnetism na-akwali.
Arcturus bụ nke halo nke Milky Way. Kpakpando ndị dị na halo anaghị agagharị n'ụgbọelu nke Milky Way dị ka anyanwụ, mana ọbịbịa ha nọ n'ụgbọ elu nwere nnukwu mmasị nke nwere ọnọdụ ọgba aghara. Nke a nwere ike ịkọwa mmegharị ya ngwa ngwa na mbara igwe. Anyanwụ na-esote ntụgharị nke Milky Way, ebe Arcturus adịghị. Otu onye kwuru na Arcturus nwere ike si na ụyọkọ kpakpando ọzọ bịa ma dakọọ na Milky Way ihe karịrị ijeri afọ ise gara aga. Opekempe, kpakpando 5 ndị ọzọ dị na Arcturus-dị ka orbits. A maara ha dị ka "Arcturus Group."
Kwa ụbọchị, Arcturus na-abịaru nso na sistemụ mbara igwe anyị, mana ọ naghị adị nso. Ọ na-eru nso ihe dịka kilomita ise kwa nkeji. Ọkara nde afọ gara aga, ọ bụ nnukwu kpakpando nke isii nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụ anya, ugbu a ọ na-aga n'ihu Virgo na ọsọ karịa 120 kilomita kwa nkeji.
Bootes, El Boyero, bụ ìgwè kpakpando dị n'ebe ugwu nke dị mfe ịchọta, nke kpakpando na-egbuke egbuke na Ursa Major na-eduzi. Ọtụtụ onye ọ bụla nwere ike ịmata ụdị skillet dị n'etiti azụ azụ Big Dipper na ọdụ. Aka nke pan a na-atụ aka n'akụkụ Arcturus. Ọ bụ kpakpando kacha enwu n'akụkụ ahụ. Ụfọdụ ndị na-anụbigara okpukpe ọkụ n’obi “afọ ọhụrụ” kweere na e nwere ndị Arcturians, bụ́ agbụrụ mba ọzọ nke nkà na ụzụ toworo eto. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e nwere usoro mbara ala nke na-agba gburugburu kpakpando a, agaraghị achọpụta ya ogologo oge gara aga.
Arcturus na-ekpo ọkụ ụwa dị ka ọkụ kandụl n'ebe dị anya nke kilomita asatọ. Ma, ka anyị ghara ichefu na ọ fọrọ nke nta ka 8 ìhè afọ site anyị. Ọ bụrụ na anyị ejiri Arcturus dochie anyanwụ, anya anyị ga-ahụ ya ugboro 40 na akpụkpọ ahụ anyị ga-ekpo ọkụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ejiri infrared radieshon mee ya, anyị na-ahụ na ọ na-egbuke egbuke ugboro 215 karịa anyanwụ. N'ịtụnyere mkpokọta ọkụ ya na ìhè pụtara ìhè (oke), a na-eme atụmatụ na ọ dị afọ 37 ìhè site na Ụwa. Ọ bụrụ na okpomọkụ dị n'elu jikọtara ọnụ ọgụgụ nke radieshon zuru ụwa ọnụ ọ na-emepụta, a na-eme atụmatụ na dayameta ga-abụrịrị nde kilomita 36, ​​nke ji okpukpu 26 ka anyanwụ.
Arcturus bụ kpakpando mbụ ga-adị n'ehihie site n'enyemaka teliskop. Onye na-enyocha mbara igwe na-aga nke ọma bụ Jean-Baptiste Morin. bụ́ onye ji obere teliskop na-ekpugharị ihe na 1635. Anyị nwere ike imegharị nnwale ahụ nke ọma nke ọma, na-ezere ihe ọ bụla ọ ga-efu iji tụọ teliskop ahụ nso anyanwụ. Ụbọchị akọwapụtara maka ịnwale ọrụ a bụ Ọktọba.
Mgbe a bịara na kpakpando dị n'azụ, mmegharị nke Arcturus dị ịrịba ama - arc nke 2,29 sentimita kwa afọ. N'etiti kpakpando kachasị mma naanị Alfa Centauri na-aga ngwa ngwa. Nke mbụ hụrụ ngagharị nke Arcturus bụ Edmond Halley na 1718. E nwere ihe abụọ na-eme ka kpakpando gosipụta mkpagharị onwe ya: ezi ọsọ ya dị elu metụtara gburugburu ya na ịdị nso ya na usoro mbara igwe anyị. Arcturus na-ezute ọnọdụ abụọ a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Arcturus na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Arcturus